Adora & etc.: နောက်ဆုံးပုံပြင်
လူတယောက်က သွေးမတော် သားမစပ် တခြားသူတယောက်ကို ဘယ်လောက်ထိချစ်နိုင်သလဲ ရှင်တို့သိကြပါ့မလား။ ပြီးတော့ အချစ်မှာ "အသွားအပြန်" တို့ "အလျားအနံ" တို့ လူတိုင်းအတွက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အမှန်တရားကြီးကိုရော ရှင်တို့လက်ခံရဲ့လား။
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်၊ သူနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ့်ဆီမှာ ပျော်စရာတွေထက် ငိုစရာတွေများခဲ့မှန်း ကိုယ်, ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီးဘယ်သူပိုသိအုံးမှာလဲ။ ကိုယ်ကပဲ ကံဆိုးတာလား။ မျှော်လင့်ချက်ပဲများလွန်းနေတာလား မသေချာပေမဲ့ ရေရေရာရာသိတာတခုက သူ ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူးဆိုတာပါ။
အခုမှ သိတာတော့လဲ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ ကိုယ်မျှော်လင့်ချက်တွေ များခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လရဲ့ ရက်တခုမှာ စာတကြောင်း၊ စကားတလုံးမှတောင် နှုတ်မဆက်ပဲ သူ့ကိုသိပ်ချစ်တဲ့၊ သူ့ကိုအောင်မြင်စေချင်တဲ့၊ သူ့ကိုအမြဲ ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့၊ သူလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်း ဘေးမှာအမြဲရှိပေးတဲ့၊ သူ့ရီးစားတွေနဲ့ ပြတ်သွားလို့ စိတ်လေနေတိုင်း,၊မျက်ရည်ကြတိုင်း ဘေးကနှစ်သိမ့်ပေးတတ်တဲ့ ချစ်သူတယောက်ကို သူ နှုတ်မဆက်ပဲထွက်သွားရက်ခဲ့တယ်။
~တော်ပါပြီ စိတ်ကုန်တယ် မေ့လိုက်ပြီ
မင်းကြောင့်ငါ အလုပ်ပျက် ညတို့နက်ပြီ
သေချာတယ် ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ပြန်မဆုံတော့ပါဘူး။ သိပြီးသား ဇတ်သိမ်းတခုအတွက်တော့ ဝမ်းမနည်းသင့်ဘူးလေ။ သူ့ကို အဲလိုပြောရင်တော့ "ဟုတ်တာပေါ့" ဆိုပြီး ခပ်ရွဲ့ရွဲ့နဲ့ သူခေါင်းငြိမ့်လိမ့်အုံးမယ်။ တမြေထဲနေရင်း တောင် ကိုယ်နဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး မတွေ့နိုင်ပဲနဲ့တော့ ရေမြေခြားမှာ ကိုယ့်ကိုသတိရဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပေါ့။ ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆယ်ခုနှစ် ၁ခုကျာ် သူ့အနားရှိ ပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အချိန်လေးတခုပေးပြီး နှုတ်ဆက်ခွင့်လေးတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။ ထိုင်နေကြ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဟိုးတုန်းက ညဥ့်နက်တဲ့အထိ မိုးရေတွေထဲသွားထိုင်ဘူးခဲ့တဲ့ ပန်းခြံလေးမှာ ညနေခင်း တခုလောက် အချိန်ဖြုံးရင်း ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့စာရင်းထဲမှာ ကိုယ့်ဆဒ္ဒတွေ အကျုံးမဝင်ဘူး။
ဖြစ်ချင်တာတွေ မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဖြစ်သင့်တာတွေကတော့ ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးလေ။ လူဆိုတာမွေးကတဲက တယောက်ထဲပဲဟာ။ ဆယ်စုနှစ်တခုစာ အသားကြခဲ့တဲ့ အကျင့်တွေကိုလတ်ရှိအခြေအနေနဲ့ လိုက်ရောညီထွေရှိအောင် ပြင်ရုံပါပဲ။ ဥပမာ - ကိတ်မုန့်အသစ်စမ်း လုပ်တဲ့အခါ သူ့ကိုဖုန်းစက်စရာမလိုတော့ဘူး၊ သူကြိုက်တတ်တဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေကိုလဲ လေ့လာစရာမလိုတော့ဘူး၊ သူနေမကောင်းတိုင်း လိုက်စောင့်ပေးရတဲ့ ဆေးခန်းမှာ ရုံးအပြန်ထမင်းမစားဘဲ အချိန်အကြာကြီးထိုင်ဖို့ မရှိတော့ဘူး၊ ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဖိနပ်အမြင့်တွေကိုလဲ ဂျောင်ထိုးထားစရာ မလိုတော့ဘူး၊ သူ့မှာ အသုံးပြတ်တိုင်း ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ နည်းနည်းကို ခွဲဝေပေးစရာမလိုတော့ဘူး၊ ပြီးတော့ သူရီးစားနဲ့ ပြတ်တိုင်း ဟန်ဆောင်ပြုံးတခုနဲ့ ဘာမှမခံစားရသလို "နင်ကလဲ အားလုံးအဆင်ပြေသွား မှာပါ။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့" လို့နှစ်သိမ့်စရာလဲမလိုတော့ဘူး။
~တော်ပါပြီ Go Go Go အဝေးကို
Gone Gone Gone ပြီးပြီ
It's so cool ဘဝဟာ ပျော်စရာကြီး
သေချာတယ် No No No နောက်တခါ
Honey..It's cool baby~
ဒါဟာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ တကယ့် နောက်ဆုံးပါပဲ.
Chit Thu Wai - It's cool, Baby
Posted by Adora etc. at 08:43
ညီလင်းသစ် 20 July 2012 at 13:42
ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်နောက်ကို တငိုငို တရယ်ရယ်နဲ့ တမ်းတနေမယ့်အစား အခုလို စိတ်မျိုးလေးနဲ့ စာမျက်နှာသစ် တစ်ခုလှန်လိုက်မယ် ဆိုတာ ဖြစ်သင့်၊ ထားသင့်တဲ့ စိတ်ထားလေး ပါပဲ..၊ ဒီသီချင်းတော့ နားမထောင်ဖူးဘူး...။
All time Favorites - Mascara (တဂ်ပို့စ်)
ဒါလေးက မြတ်ကြည် တဂ်ထားတဲ့ပို့စ်ပါ။ သူလေးက အောက်တိုဘာလထဲမှာ သဘောတွေ့သမျှရေးပါ ဆိုပေမဲ့ ဒီကနဲနဲကွန့်ပြီး နှစ်သက်မိတဲ့ မက်စ်ကာရာတွေအကြောင်းစုစည...